GV Face: Voaràra Ao Yemen tantanin’i Houthi Ny Fihetsiketsehana · Global Voices teny Malagasy
GV Face: Voaràra Ao Yemen tantanin'i Houthi Ny Fihetsiketsehana
Voadika ny 12 Febroary 2015 2:57 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, čeština , Swahili, Español, Deutsch, English
Ao anatin'ny korontana ara-politika i Yemen, tsy manana filoha sy governemanta io firenena io hatramin'ny nakan'ny milisy Houthi ny fitondram-panjakana sy ny lapam-panjakana tao Sanaa renivohitra. Tamin'ny 9 Febroary, namoaka antontan-taratasy miaraka amin'ny fangon'ny Ministeran'ny Atitany mandràra ny fihetsiketsehana rehetra ao Yemen izy ireo.
Fanapahan-kevitra vaovao ao amin'ny tanin'i Houthi: Voaràra ny hetsi-panoherana rehetra, mandray ny demokrasia vaovao i Yemen
Tamin'ny famoahana ny “Fanambarana ny Lalàmpanorenana” nataon'ny Houthis, eo am-pametrapetrahana ny toerany ny fahefana vaovao. Inona ny eritreretin'ny Yemenita? Ahoana no fahitan'izy ireo ny fotoanan'ny tetezamita eo ambany fitondran'ny Houthis ary inona no tena ahiahin'izy ireo?
Hiresaka amin'ireo mpikatroka avy ao Yemen isika ao anatin'ity andian'ny GVFace ity dia Baraa Shiban (@BShtwtr), Osama Alrawhani (@PoliticsYemen), Alhussain Albukhaiti (@HussainBukhaiti) ary @NoonArabia .
Mandamina ny adihevitra miaraka amiko i Amira Alhussaini, tonian-dahatsoratry ny MENA.